उत्तम ग्याँस ग्रिल के हो? सम्पादकीय परीक्षणले तपाईंलाई सल्लाह दिन्छ
सुरु बगैचा बगैचा आराम ग्याँस ग्रिल
बाहिरी र क्याम्पिंग
1 ग्याँस ग्रिल के हो? - तपाईंको बगैचाको लागि घरको भान्सा!
2 ग्याँस ग्रिलसँग के गर्ने?
3 सीधा गिलिंग: उच्च तापमान, छोटो पकाउने प्रक्रिया
4 अप्रत्यक्ष गिलिंग: सज्जन संग कम तापमान
5 ग्याँस ग्रिल खरिद गर्दा तपाई के हेर्नुहुन्छ?
6 खरिदका लागि कुन उपकरण आवश्यक छ?
7 एक ग्याँस ग्रिल कसरी काम गर्दछ?
8 तापमान नियन्त्रण
9 फैट गर्त र बोसो जलिरहेको
10 हेरविचार र सफाई
11 के हुन् व्याख्याहरू र के यो विशेषता छ?
12 ग्याँस ग्रिल - बगैचाको लागि मोबाइल भान्सा लाइन
13 चारकोल - क्लासिक
14 इलेक्ट्रिक ग्रिल - इनडोर प्रयोगको लागि सानो
15 लाभ र हानि
ग्याँस ग्रिल के हो? - तपाईंको बगैचाको लागि घरको भान्सा!
एक संग ग्याँस ग्रिल तपाईं बस ससेज र स्टेक तलना भन्दा धेरै गर्न सक्छन्। तपाईं आफ्नो इन्डोर भान्सा मा तयार गर्न सक्ने सबै, ताजा हावा अहिले बाहिर त्यहाँबाट आनन्द सकिन्छ - एक ग्याँस ग्रिल तपाईं सबै भाँडा र धेरै पाठ्यक्रम तयार गर्न संभावना प्रदान गर्दछ।
स्वच्छ, प्रभावकारी, छिटो - धेरै अवसरहरू उत्साही बारबेक्यू स्वामीहरूको लागि उपलब्ध छन्
ग्याँस ग्रिलको लागि धन्यवाद, तपाईंको बारबेक्यू पार्टीको लागि तयारी समय छोटो छ: बाईबेक्यू पछि कोइलाको भत्किएको र राख को निपटानको लागि आवश्यक छैन। अर्को सकारात्मक पक्ष प्रभाव यो छ कि कुनै स्पार्क छैन। तपाईंको लुगाहरू र टेबलकोटहरू आगो होईनबाट सुरक्षित छन् र तपाईं आफैं गंध नगर्न सक्नुहुन्न। यसको सट्टा, ग्याँस ग्रिलहरू छिटो र सफा छन्: ग्यास सफासाथ जलाउँछ, साल्ट विकसित गर्दैन। तापमान कम से कम समय मा छ, जहां तपाईंलाई यसको आवश्यकता छ। बन्द गरिएको ग्याँस ग्रिलहरूले5मिनेट भित्र 200 डिग्री भित्र तापमान सम्म पुग्न सक्छ। यसको अतिरिक्त, तिनीहरू नियामक छन् र निरन्तर गर्मी रिलीजमा। त्यसैले तपाईं लामो समयसम्म टाढाको बारबेक्यू पार्टीको लागि सर्वोत्तम अवस्थाहरू अन्तर्गत स्टिक स्टिकहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। बन्द ग्याँस ग्रिलहरू सधैं तापमान प्रदर्शन र ग्यास प्रवाह नियन्त्रण संग सुसज्जित छन्। यदि तपाईं आफ्नो खाना मन पराउनुहुन्छ भने, तपाईंले यसलाई मौका दिन छोड्नु पर्दैन!
ग्याँस ग्रिलसँग के गर्ने?
ग्रिलिंग, बरसाना, बरफ, बिरोध र बेकिंग - तपाईंसँग खाना तयार गर्न अनगिनत सम्भावनाहरू छन्। एक ग्याँस ग्रिलको साथ तपाईं आफ्नो बगैचामा स्वादिष्ट भोजन र राम्रा आनन्दको आनन्द उठाउन सक्नुहुनेछ। साथै, तपाईं कवर वा प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष पकाउने विधिहरू बीचको ग्यास ग्रिलसँग छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
सीधा गिलिंग: उच्च तापमान, छोटो पकाउने प्रक्रिया
यस अवस्थामा, गर्मी स्रोत सीधा भोजन तल स्थित छ। यो ग्रिल विधि विशेष गरी मासुको लागि उपयुक्त खाना पकाउने समयहरू जस्तै चप्स वा स्टिकको रूपमा उपयुक्त छ - यो प्यानमा मासुको तेज फ्राइकिङ जस्तै हो। यहाँ ग्रीनी तापमान 220 र 300 डिग्री बीचमा छ, गर्मीले सुनिश्चित गर्दछ कि ग्रीस मा ग्रील्ड मासु नजिक छ, तर यो भित्रबाट ताजा रहन्छ। मासु लगातार घुमाउनुपर्छ त्यसैले यसले जलाउँदैन।
अप्रत्यक्ष गिलिंग: सज्जन संग कम तापमान
यस विधिको लागि ढक्कन र थर्मामीटर आवश्यक छ। ग्रिल पहिरन गर्न पछि, गर्मी खाना पकाउने क्षेत्रमा राम्ररी वितरण गरिन्छ र मासु ग्रिल गेटमा राखिएको छ ताकि यसले आगोलाई सीधा असर गर्दैन। बहु-ज्वाला ग्याँस ग्रिलको स्थितिमा, यो मध्य बर्नर स्विच गर्न सिफारिस गरिन्छ, तापमान 160 मा 200 डिग्रीमा बसोबास गर्नुपर्छ। बन्द ढक्कन र असिना तापक्रमको कारणले गर्दा, हवा भित्र अब परिसर सुरु हुन्छ। तदनुसार, यस विधि एक पाक ओवन को पुनरुत्थान कार्यक्रम को समान छ र एक घन्टा को एक चौथाई भन्दा बढी को खाना पकाने को मासु को लागि उपयुक्त छ, जो कि रजत वा मासु को टुकडा टुकडे छ। जबकि अब मासु को धीरे हुड को तल, तपाईं सँग बियर को बोट पी या सलाद तैयार गर्न को लागि पर्याप्त समय छ।
ल्यान्डम्यान ग्यास ग्रिल ट्राइटन Pts 2.0, चाँदी, 57 x 123 x 121 सेमीडिस्प्ले
दुई स्टेपलेस एडजस्टेबल स्टेनलेस स्टील बर्नर (प्रत्येक 3,5 किलोवाट) र आरामदायक पायजो इग्निशनको साथ कॉम्प्याक्ट ग्यास बारबेक्यू वैगन
समान तापमान वितरण आविष्कार पीटीएस प्रणाली र आदर्श तापमान नियन्त्रणको लागि ढक्कनमा तापमान सूचकलाई धन्यवाद
इनेमेल गरिएको कास्ट फलाम ग्रिल (ग्रिल क्षेत्र: लगभग 48 x 44 सेमी) र enamelled वार्मिंग र्याक एक लामो सेवा जीवन संग र एक आरामदायी सफाई को लागी
छेउ टेबुल र ग्यास सिलिन्डर भण्डारणको लागि तल्लो क्याबिनेट बन्दको कारण अन्तरिक्ष बचत भण्डारण
एर्गोनोमिक उद्घाटन र बन्द हुने र स्थिर स्थिरताको लागि विशिष्ट ह्याण्डलहरू (ढक्कन र अगाडिको ढोका) डबल-पर्खाल ढोका र लक योग्य कास्टरको लागि धन्यवाद
ग्याँस ग्रिल खरिद गर्दा तपाई के हेर्नुहुन्छ?
तपाईंले ग्याँस ग्रिल प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले, तपाईंलाई grilling को महत्व बाट सजग हुनु पर्छ। के यो मोबाइल ग्याँस ग्रिल वा निश्चित स्थान संस्करण प्रयोग गर्न सम्भव छ? मोबाइल ग्याँस ग्रिलहरू तिनीहरूको सजिलो आकारको विशेषता हुन्। उनीहरूले प्रकृतिमा हरेक ठाँउ लिन सक्छन्, तर तिनीहरू सबै भन्दा सानो ब्याकोनिक्स र छत को छतमा पनि फिट हुन्छन् किनकी उनि केवल एक सानो ग्याँस बोतल वा कारतूस संग संचालित हुन्छन्। ठूलो, कम मोबाइल संस्करण ठूलो ग्रिल क्षेत्र र धेरै बर्नरहरूको साथमा देखिन्छ, जुन व्यक्तिगत रूपमा समायोजित गर्न सकिन्छ। दुवै मोडेलहरूसँग समान रूपमा राम्रो ग्रेिलिङ परिणामहरू सम्भव छन्, यो तपाईंको आवश्यकता र तपाईंको पैसाको थलोमा बढी निर्भर गर्दछ।
खरिदका लागि कुन उपकरण आवश्यक छ?
केही उपकरणहरूले ग्याँस ग्रिलको गुणलाई चित्रण गर्दछ। तथ्य भनेको उच्च गुणस्तरसँग यसको मूल्य हो। खरिद गर्दा निम्न मापदण्ड लागू हुन्छ।
ग्यास खपत: ग्यास खपत किलोवाटमा व्यक्त गरिएको छ। यो जानकारीले बर्नरको शक्ति दिन्छ र तपाईंलाई बताउँछ कि एक घण्टा भित्र ग्रिल कितनी ग्यास खरिद गर्दछ। सावधानीपूर्वक यो निश्चित हुनुपर्दछ कि राम्रो ग्याँसिंग तापमानमा राम्रो ग्याँस ग्रिलको रूपमा सानो गाँसको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
स्टीप्लेस ग्यास समायोजन: बर्नरहरूको विनियम समायोजन हुनुपर्छ र अलग देखि सेट गर्न सकिन्छ। एक नियन्त्रित ग्रिलिङ तापमानले तपाईंलाई सबैभन्दा राम्रो र स्वादको आनन्द लिने अनुमति दिन्छ।
ग्रिल क्षेत्रको बर्नर र आकारको संख्या: पकाउने ग्रिलको विभिन्न खाना पद्धतिको अधिकतम प्रयोग गर्न को लागी, कम से कम दुई बर्नरहरू हुनु पर्छ। अप्रत्यक्ष ग्रुपिंग प्रक्रियाको दौरान विभिन्न तापमान क्षेत्रहरू उत्पादन गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ। बस को रूप मा ग्रिल क्षेत्र को आकार महत्वपूर्ण छ। एक दिशानिर्देशको रूपमा, 200 सेमी2 मिश्रित बार्बेक्युको लागि प्रति व्यक्ति ग्रिलिङ क्षेत्र।
स्थिरता: Gasgrills घर बाट नकल हो, यानी उच्च ग्रिल, निर्माण को अधिक झुकाव। तपाईंले खरिद गर्नुभन्दा पहिले, ग्रिलको स्थिरता परीक्षण गर्नुहोस् र जाँच गर्नुहोस् कि घटकहरू खुसी हुन्छन्। एक ग्रिल सुरक्षित छैन ग्रिल मास्टर र उनको सम्पूर्ण वातावरण खतरा हो।
उच्च गुणस्तरको सामग्री: स्टेनलेस स्टील, चीनी मिट्टी के बरतन-ईन्मेलेटेड एल्युमिनियम वा कास्ट आयरन - यी सामग्रीहरूले राम्रो गर्मी प्रवाह र सर्वोत्तम चिसो मजा गर्न अनुमति दिन्छ। खाना पकाउने इलाका लामखुट्टे र कोटिंग्सबाट मुक्त हुनुपर्छ, किनकि जब गिलिंग, धेरै उच्च तापमान उत्पन्न हुन्छ, यसले सामग्री भंग गर्न सक्छ र अन्ततः खाना पकाउँछ र सम्भवतः खाएको हुन्छ। उच्च गुणस्तरको सामग्री सँधै सफा गर्न, खाना तटस्थ र स्वच्छ।
एक ग्याँस ग्रिल कसरी काम गर्दछ?
एक ग्याँस ग्रिल सामान्यतया तरकारी वा प्रोपेन तरलिएको ग्यास संग सञ्चालन गरिन्छ। ग्याँस कन्टेनरहरू ईन्धन व्यापारमा उपलब्ध छन्, ग्याँस वितरक वा हार्डवेयर पसलहरूमा पाँच वा ग्यारह किलोग्राम। Propane यसको अझ राम्रो पोलोफिक मूल्यको कारण धेरै पटक प्रयोग गरिन्छ, जसको अर्थले आगो हटाइन्छ। ग्याँस बोतल एक नली प्रणाली मार्फत बर्नरसँग जोडिएको छ, ग्रिल सामान्यतया ज्वाला वा एक चकलेट द्वारा उत्पन्न स्पार्क द्वारा अनदेखा गरिन्छ।
खाना पकाउने कक्षमा गर्मी विनियमित गर्न विभिन्न डिजाइनहरू छन्: केही मोडेलहरू लावा वा सिरेमिक ढुङ्गाहरू छन् जुन तापलाई अवशोषित गर्छन् र अझै पनि आग बन्द गरिसकेको तापनि तापनि तापनि तापक्रम जारी गर्दछ। अन्य मोडेलहरू एक पाइप प्रणाली गेट अन्तर्गत छ, जसबाट धेरै साना आगोहरू आउँछन्। दुवै अवस्थामा, खाना पकाउने कक्षमा ग्याँस आपूर्ति र यसरी तापमान वाल्व मार्फत विनियमित हुन्छ। हूड बन्द भएपछि, यसले छिटो हटाउँछ। पकाउने कक्ष भित्रको तापक्रम थर्मामीटर प्रयोग गरेर पढ्न सकिन्छ। यो ग्यास भोल्युम नियामक मार्फत माथि वा तल समायोजन गर्न सकिन्छ।
फैट गर्त र बोसो जलिरहेको
प्रत्येक ग्याँस ग्रिल बर्नर को तहत एक ड्रिप ट्रे छ, जो पानी देखि भरिएको छ। यो भनिन्छ Fettwanne। ग्रुपिंग प्रक्रियाको दौरान, ग्रीलिङको समयमा उत्पादन गरिएको तेल खतरामा फैलिएको छ र त्यसपछि सजिलै संग निस्कन सकिन्छ। यद्यपि, यो ग्रुप सधैं सफा गर्न र तिनीहरूको स्तर जाँच गर्न राम्रो छ। किनभने जब प्यान धेरै भरी छ र मोटो यसको अधिकतम तापमान पुग्छ, यो सिम सुरु हुन्छ, स्क्वार्ट, र अन्ततः जलाइन्छ। एक स्वच्छ र जहाँसम्म सम्भावित वोसो जमाले जोखिम कम राख्छ।
Weber आत्मा ई-एक्सएनएनएक्स क्लासिक ब्ल्याक
वेबर द्वारा मूल।
हेरविचार र सफाई
धेरै सरल: तपाईलाई भित्ता साबुन, स्पंज र तापमान प्रतिरोधी दस्तानेको बाल्टी चाहिन्छ। यदि ग्रिल अझै पनि न्यानो छ भने, तपाईं ग्रिल मा पानी मा स्पंज भिगो घुम्न सक्नुहुन्छ, ढक्कन बन्द गर्नुहोस् र मध्य स्तरमा केहि मिनेटको लागि ग्रिल जलाउन दिनुहोस्। हुड खोल्दा, तपाईं चकित हुनेछ: धेरै ग्याँस हराएको छ। डिशवाशरमा गेट्स र ज्वाला डिस्लेटरहरू सफा गर्न सकिन्छ। सूखे चिसो र ग्याँस अवशेषहरू हटाइनु पर्छ। ब्याक्टेरिया यहाँ पखाल्न सक्छ, जुन तपाईंको मासु मा बसोबास गर्न मात्र सजिलो हुन्छ। साथै, मलबेले पनि स्वादलाई स्वादलाई असर गर्न सक्छ।
के हुन् व्याख्याहरू र के यो विशेषता छ?
ग्रिलिंग मात्र एक मात्र खाना तयारी भन्दा बढी छ, यसको लागि यो जुनून हो, अरुलाई विशेष गरी सामाजिक सङ्गठनको आनन्द लिन्छ। तर एक कुरा सबैको लागि हो: स्वाद! संलग्न गरिएको तीन ठूलो ग्रिल प्रकारहरू हुन्।
ग्याँस ग्रिल - बगैचाको लागि मोबाइल भान्सा लाइन
ग्याँस ग्रिल आरामदायक र छिटो छ। हीटिंग समय धेरै छोटो छ कि पहिलो सॉसेज केही मिनेट भित्र साइज हुन सक्छ। समायोज्य तापमान र धेरै अतिरिक्त प्रकार्यहरूसँग बगैंचामा मोबाइल मिनी-भान्साको साथमा उत्कृष्ट बर्तन भेट्न सकिन्छ। यो प्रकार निश्चित रूप देखि धेरै सहज र लक्जरी छ, तर दुर्भाग्यवश एक नै समयमा धेरै महंगा हुन्छ।
चारकोल - क्लासिक
संग कोइला zu ग्रिल सबैभन्दा विस्तृत संस्करण हो तर एकै समयमा यो बारबेक्यू खुशीको मूल र अवधारणा हो। यो एक जीवन सेटिङ हो, कसैले समय लिन्छ र सबैभन्दा प्रामाणिक र सबैभन्दा पुरानो तरिका प्राप्त गर्न पाउँदछ मासु तयार। त्यसैले एक स्वीकार गर्दछ कि मासुको लागि पहिलो तापनि सम्पर्क गर्नको लागी यसले राम्रो आधा घन्टा लाग्छ र यो लामो समय बार्बेकहरुमा पुनः भरिएको हुनुपर्छ। चारकोल अंशले थप प्रयास, समय र ऊर्जा लिन्छ धुम्रपान मायालु यो सही बारबेक्यू अनुभव को सबै निर्णायक भाग पछि छ।
इलेक्ट्रिक ग्रिल - इनडोर प्रयोगको लागि सानो
इलेक्ट्रिक ग्रिलहरू ती बारबेक्यू स्वामीहरूका लागि हुन्, जसले चारकोल पनि महान् छन् र ग्यास होइन। यो घर मालिकहरु को लागि एक सुरक्षित, आसान समाधान छ जो सुरक्षित, स्पेस - बचत र कम गंध मा बालकनी बारबेक्यू चाहन्छु। तथापि यो आलोचना हो कि तिनीहरू मासु तीव्र वा ठूलो ग्रिल खानामा आक्रमण गर्न धेरै कम शक्ति छन्। साउजजहरू पकाएर खाना पकाउँछन्, तर तिनीहरू भुइँमा खान्छन्। हुनत बिजुली grills आफ्नो उद्देश्य पूरा - बाहिर आँधी rages पनि - तर उत्सुक ग्रिल मास्टर स्वादिष्ट BBQ गन्ध बिना कुनै तरिका छैन सही मुड अप आयो कि गुनासो।
लाभ र हानि
ग्याँस ग्रिलको फाइदा स्पष्ट रूपमा आराम, समय बचत र स्वच्छता हुन्। मिनेटभित्रै पहिलो सॉसेज पहिले नै ग्रिलमा छ। कुनै Grillanzünder, पर्खनु पर्दैन। तापमान नियन्त्रण र विनियम गर्न सजिलो छ। यस तरिका, छनौटको मैदान ठीकसँग बिन्दुमा तयार हुन सक्छ। यसबाहेक, विभिन्न खाना पकाउने विधिहरूले विभिन्न तयारीका लागि भित्ताको खाना खाने को लागी अनुमति दिन्छ र धेरै लेयर ग्रिडले एकै समयमा विभिन्न चीजहरू तयार गर्न सम्भव बनाउँछ। महान: कुनै पनि कुरा बार्बेक्यु पार्टी कति लामो समयसम्म रहन्छ, हरेक स्टिक महसुस गर्न महँगो हुन सक्छ महसुस गर्न को लागी।
तर, ग्याँस grills को गोलीबारी दुई समस्या छ: ग्याँस डिस्टिलरी पनि शुरुआती खरीद अघि एक पेशेवर द्वारा संचालन बताए गर्नुपर्छ किन जो छ, प्राविधिक जटिल छ - र त्यसैले ग्याँस grills अन्य grills भन्दा धेरै महंगा पनि छन्। एक राम्रो ग्याँस ग्रिलको लागि तपाईंले कम्तीमा 200 यूरो लगानी गर्नुपर्नेछ, अन्य उपकरणको विशेषताहरूको आधारमा तपाईँले तालिकामा थप राख्न सक्नुहुन्छ। खाना पकाउने विकल्पहरू र धेरै प्लेटहरूसँग यो 1000 यूरो सम्म हुन सक्छ। यसरी, ग्यास ग्रिल हाम्रो बीच भावुक बारबेक्यु मालिकको लागि केहि हो। उत्तिकै ग्याँस बोतल रूपमा डिजाइन ईंन्धन को खरीद केवल विशिष्ट स्टोर खोल्ने पल्ट स्टोर गर्नुहोस् र ग्याँस स्टेशन मा घडी को आसपास कोइला रूपमा उपलब्ध छन् विस्तृत। यो तरिका, एक सहज बारबेक्यु-पार्टी विचार चाँडै गर्न सकिन्छ।
भावुक बारबेक्यू र पकाउने पेशेवरहरूको लागि एक ग्यास ग्रिल एक ठूलो खरिद हो। तपाईं आफ्नो शौक गर्न सक्नुहुन्छ र उत्कृष्ट खाना तयार गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, तपाईंलाई पनि आवश्यक छ कि तपाईं हातमा आवश्यक सानो पैसा लिन चाहानुहुन्छ। धेरै ग्रिल मास्टर निश्चित रूपमा आगो हराइरहेको छ र "वास्तविक" बार्बेक्युको आनन्द उठाउन धुम्रपान गर्दछ। ग्याँस grills को लागि, यो तथापि बरु सान्त्वना र "ग्रिल वेदी" छ शानदार तरिका गर्न खाना तयार: उच्च प्रतिहरू पनि एक तथाकथित स्वाद रेल छ, दाखमद्य, बियर वा जडीबुटी भर्न सकिन्छ। त्यसपछि त्यसमा यसको स्वाद खानाको लागि ग्रिल प्रक्रियाको समयमा ग्रीक गर्न सकिन्छ। Connoisseurs को लागि पूर्ण भोजनालय आउटडोर लाइन!
Enders ग्यास ग्रिल KANSAS PRO4SIK प्रोफी टर्बो, साइड कुकरको साथ, टर्बो जोन, सिम्पल क्लीन, हीट रेन्ज, burn बर्नर + अवरक्त, ग्रिल थर्मामीटर, कास्ट फलाम ग्रिल, आउटडोर किचन, ग्रिल कार्ट, ग्यास ग्रिल, # 4०8708 प्रदर्शन
नयाँ Heat RANGE बर्नर प्रणाली: कम खाना पकाउन र तीब्र सिरी seको लागि स्थिर तापक्रम
शीर्ष सुविधाहरू: TURBO ZONE भारी गर्मी को कारण एक स्टेक को सही भूनिंग सक्षम गर्दछ। सरल सफा प्रकार्यले सफा गर्न सजिलो पार्छ
अतिरिक्त सुविधाहरू: कुकर (K) साइड शेल्फमा एकीकृत, शक्तिशाली इन्फ्रारेड बर्नर (I), अवलोकन विन्डो (S) र व्यावहारिक सिंक
स्विच ग्रिड: ठोस, enamelled कास्ट फलामको टोकरी (चार भाग) हटाउन योग्य गोल तत्वको साथ र step चरणविहीन समायोज्य स्टेनलेस स्टील बर्नर प्रत्येक each.4 किलोवाटको साथ
एकीकृत थर्मामीटरको साथ एनमेल, डबल-वाल कुकिंग हुड
Bestseller no। 2
TAINO लाल + + १ ग्रिल ट्राली BBQ स्टेनलेस स्टील बर्नर ग्यास कालो incl। सामान कभर तिरपाल ग्यास नियामक ग्यास दबाव दबाव नली ग्यास नली प्रदर्शन
ग्यास ग्रिल TAINO RED4+ 1 - incl। कभर र दबाव नियामक! मुख्य बर्नर स्टेनलेस स्टील / १ साइड बर्नरबाट बनेको / डबल-वाल हुडको साथ (भित्रबाट एल्युमिनियमको बनेको) तपाईंको बालकनी, टेरेस वा शिविरका लागि आदर्श।
समग्र आयामहरू: करीव।
सबै ब्यानर असीमित चर छन् र एक पाईजो इग्निशन छ। एक तापक्रम प्रदर्शन ढकनीमा एकीकृत छ - साइड टेबलले ग्रिल सामान र खानाको लागि पर्याप्त ठाउँ प्रदान गर्दछ
ग्रिल एक्सेसरीज र खाद्यका लागि ग्रीड टेबुलहरू - 5-8kg ग्यास बोतलहरूको लागि व्यावहारिक बोतल होल्डर
नयाँ र मूल प्याकेजि / / तुरून्त उपलब्ध - सजिलो असेंब्ली
Proficook पीसी GG 1057 ग्याँस ग्रिल Incl। तापमान प्रदर्शन,3स्टेनलेस स्टील बर्नर लागि indiv। तापमान नियन्त्रण, हटाउन सकिने चिल्लो ड्रिप कन्टेनर3ताप क्षेत्र, लगातार समायोज्य तापमान सेटिङ प्रदर्शन
FRESH & DICCIOUS - फेन्सी ग्रिलिंग? प्रोफिकुकबाट तपाईंको आफ्नै ग्यास ग्रिलमा एभिटिजिंग ग्रिल्ट विशेषताहरूको आनन्द लिनुहोस्। मासु, माछा, तरकारीहरू - जहाँ भए पनि तपाईलाई यस्तो लाग्छ
शक्तिशाली र उच्च गुणवत्ता - पीसी- GG 10573असीमित समायोज्य पुज बटन pizo इग्निशन (अधिकतम 9,45 किलोवाट संग) को साथ शक्तिशाली प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ग्रिलिंग को लागी सुविधा। 54 x 40 सेन्टीमिटरको ग्रिलिंग सतहमा प्रत्येक घटकले यसको ठाउँ पत्ता लगाउँदछ र तयार भोजन लामो होल्डिंग ग्रिडमा आरामसँग राख्न सकिन्छ।
SCHICK & MODERN - प्रोफिकूक ग्यास ग्रिल मात्र यसका सुविधाहरूका साथ विश्वस्त छैन, तर उच्च-गुणवत्ता, कालातीत डिजाइनको साथ। ऊसँग यो ठूलो भण्डारण ठाउँ र वार्मिंग र्याकको अतिरिक्त आरामको उच्च स्तर पनि छ
सहज क्लिनिंग - ग्रिलिंग पछि ग्रिलिंग भन्दा पहिले हो। थोरै सफाईको साथ, तपाई लामो समय प्रयोग पछि पनि आफ्नो ग्यास ग्रिल नयाँको रूपमा राख्नुहुन्छ। उच्च-गुणस्तरको लेपित ग्र्याट्स र इन्टिग्रेटेड ड्रिप ट्रे हटाउन र सफा गर्न सजिलो छ, ताकि बार्बेक्यु रमाइलो कहिल्यै छोटो हुँदैन।
सहायक उपकरण - एक ग्यास प्रेशर रिड्यूसर र जर्मनी र अष्ट्रियाका लागि ग्यास नली समावेश छन्।
R BBSLE BBQ स्टेशन Videro G6, कालो स्टील, १157 x x० x ११60 सेन्टीमिटर, main मुख्य बर्नर, १ प्राइम जोन, १ साइड बर्नर, ग्लास इन्सर्ट र थर्मामिटरको साथ ढक्कन, रोटर घुम्ने घुम्ती
X.० मुख्य बर्नर स्टेनलेस स्टीलले बनेको 5. k किलोवाटको शक्ति प्रत्येक, १x प्राइम जोन, १x साइड बर्नर 3,5.० किलोवाट संग सास वा साइड डिशको तयारीको लागि
ग्रिल क्षेत्र: करीव 92,5 २..45x4.162 सेमी = 92,5.१16२ सेमी²; तताउने सतह: करीव .1.480 २..XNUMXx१ cm सेमी = १.XNUMX० सेमी²
प्राइमजोनले एक थप क्रिस्पी फिनिशका लागि 800 ° C सम्म पुग्छ
गिलास सम्मिलित ढकले ग्रिल हुड बन्द भए पनी पकाउने ठाउँमा अन्तरदृष्टि सुनिश्चित गर्दछ; Incl। l C र ° F मा प्रदर्शनको साथ ठूलो ढक्कन थर्मामीटर
Kg किलोग्राम (DE / m० mbar) सम्म ग्यासको बोतलहरूको लागि ग्रिल अन्तर्गत ठाडो भण्डारण ठाउँ
TAINO बेसिक3+ 1 ग्यास ग्रिल सेट incl। कवर / दबाव दबाव रिलर / कास्ट-लोहा ग्रिल प्लेट ग्रिल / ग्रिल-किट-केस ग्रिल कार्ट BBQ स्टेनलेस स्टील बर्नर साइड कुकर ग्यास ग्रिल TÜV श्वार्जडिस्प्ले
सेटमा ग्यास ग्रिल। मौसम संरक्षण हुड, कास्ट फलाम ग्रिल प्लेट र ग्रिल, ग्रिल कटलरी केस र तत्काल ग्रिल सुरूका लागि ग्यास नियामक -3मुख्य बर्नर स्टेनलेस स्टीलको बनेको छ - 1 साइड बर्नर यो BBQ ग्रिल TÜV Rheinland प्रमाणित छ - प्रमाणपत्र नम्बर QNNXX
ग्रिल क्षेत्र: करीव। 52x36 सेमी (2-pcs।) - हटाउन योग्य ग्रीस ट्रे - मोबाइल ग्रिल कार्ट - बेनर असीमित समायोज्य हो - incl। पिजो इग्निशन - तापमान डिस्प्ले इन्टिग्रेटेड - पक्ष भण्डारको लागि धेरै भण्डारण ठाउँ धन्यवाद - आधार क्याबिनेटमा सामानहरूको लागि ठाउँ।
पूर्ण कास्ट फलाम सेट (ग्रिल ग्रैट + अनुक्रमणिका सम्मिलित) आयाम: 33,5 x 52 सेमी, वजन: करीव।4किलो - 18tlg। बारबेक्यू कटलरी आयाम: करीव। 50 x 21 x 8 सेमी, कटलरी सामग्री: उच्च गुणवत्ताको स्टेनलेस स्टीलको बनेको, वजन: करीव। 2,5 किलो
रंग: ब्ल्याकवटरप्रूफ र यूभी प्रतिरोधी मौसम संरक्षण कभर: करीव।
नयाँ र मूल प्याकेजि / / जहाज पठाउन तयार - डिस्सेम्ब्ल्ड डेलिभरी, सजिलो असेंब्ली
प्रस्तावBestseller no। 6
एन्डर ग्यास ग्रिल SAN DIEGO 3, ग्रिल थर्मामीटरको साथ,3स्टेनलेस स्टील बर्नर स्टेपलेस, सानो ग्रिल, स्टेनलेस स्टील ग्रिल ग्रेट, बाल्कनी ग्रिल, क्याम्पिंग ग्रिल, स्थिर साइड शेल्फ, शक्तिशाली, # 81166 सूचक
शक्तिशाली प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गिलिंगको लागि3असीमित समायोज्य स्टेनलेस स्टील बर्नर
स्टेनलेस स्टील ग्रिड (50,5x33 सेमी / 1.666,5 सेमी²) र स्टेनलेस स्टीलको बनेको गुन्जाउने तताउने र्याक
नियन्त्रण नबमा ब्याट्री रहित पाईजो इग्निसनले सुरक्षित, विश्वसनीय इग्निशन सक्षम गर्दछ
2 कडा साइड प्यानल र भण्डारण खाली ठाउँ (53,5 x 35 सेमी) अगाडि कपडाको साथ अझ बढी स्थान प्रस्ताव गर्दछ।
2 आउटडोर पाels्हरू आरामदायी पुनःस्थानका लागि
TAINO RED6+ १ ग्यास ग्रिल ग्रिल कार्ट BBQ स्टेनलेस स्टील बर्नर ग्यास ग्रिल कालो
ग्यास ग्रिल TAINO लाल + + १ - स्टेनलेस स्टीलको बनेको मुख्य बर्नर / १ साइड बर्नर / डबल-वाल हुडको साथ (भित्रबाट बनेको एल्युमिनियम) तपाईंको बालकनी, छत वा शिविरको लागि आदर्श।
प्रस्तावBestseller no। 8
मेयर बारबेक्यू ZUNDA ग्यास ग्रिल MGG-341 प्रो backburner डिस्प्लेको साथ
ग्यास ग्रिल पूर्ण ग्रिल पावर सहित stain स्टेनलेस स्टील बर्नर र एक साइड बर्नर, जुन तपाईं तात्न वा न्यानो राख्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एक आरामदायक जाडो बारबेक्यू को लागी mulled वाइन गरम गर्न को लागी पनि आदर्श
इन्फ्रारेड ब्याक बर्नर उच्च खाना पकाउने ठाउँ र रोटिसरीको लागि होल्डरहरूसँग। ग्यास ग्रिलको पछाडिको भित्री भित्तामा पछाडि बर्नरले पक्का गर्दछ कि ताप तापक्रममा घुमाएको खानामा समान रूपमा वितरित गरिएको छ।
कास्ट फलाम ग्रिल ग्रेरेट, एकीकृत थर्मामीटरको साथ ग्रिलको ढक्कन, तातो वितरण र बेस क्याबिनेटमा प्रशस्त भण्डारण ठाउँ, जसले सामानको लागि मात्र होइन तर ग्यासको बोतलको लागि पनि ठाउँ प्रदान गर्दछ।
हटाउन योग्य ग्रीस ड्रिप ट्रे, sw कुंडा कैस्टरहरू सहित ग्रिल ट्राली, तीमध्ये २ स्थिर स्ट्यान्डका लागि ब्रेकको साथ
Sw कुंडा क्यास्टरलाई धन्यवाद - ती मध्ये २ ब्रेकको साथ - तपाईले आफ्नो ग्यास ग्रिललाई पछाडि बर्नरको साथ तपाईको इच्छा अनुसार सार्न सक्नुहुन्छ।
प्रस्तावBestseller no। 9
२-बर्नर ग्यास ग्रिल, फोल्डेबल साइड प्यानलको साथ BBQ ग्रिल ट्राली, स्टेनलेस स्टील आवास, कास्ट फलाम ग्रिल ग्रेरेट, थर्मामीटर, कभर, नि: शुल्क नुस्खा (पीडीएफ), बार्नी - आधारभूत प्रदर्शन
पावरफुल - बार्नीसँग २ चरणविहीन समायोज्य छ, व्यक्तिगत रूपमा पाईजो इग्निसनद्वारा इग्नेनेन्ट, स्टेनलेस स्टील बर्नरको कुल आउटपुट 2. k केडब्ल्यू (बेसिक) वा १२ किलोवाट (डिलक्स) direct०० डिग्री सेल्सियस सम्म शक्तिशाली प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ग्रिलिंगको लागि।
उच्च गुणवत्ता - स्टेनलेस स्टील ग्यास ग्रिल कास्ट आयरन ग्रिल (x०x40cm सेमी) ले सुसज्जित छ, जसले तातो वितरणको पनि सुनिश्चित गर्दछ। एक वार्मिंग र्याक खानाको अस्थायी भण्डारणको लागि पनि एकीकृत गरिएको छ।
व्यावहारिक - यसको फोल्डेबल पक्ष (आधारभूत) लाई धन्यवाद, ग्रिल ट्राली दुबै कॉम्प्याक्ट र विस्तार गर्न सकिन्छ, ताकि छेउको टेबुल तपाईंको बार्बेक्यु सामानका लागि प्रशस्त ठाउँ प्रदान गर्दछ। कडा पाels्ग्रा सहज ढुवानी सुनिश्चित गर्दछ।
डिलिभरीको स्केप - बार्नी नली र प्रेशर रिड्यूसर (mb०mbar) को साथ आउँदछ, तपाईंको ग्रिल भाँडाहरू र वेदरप्रूफ कभरको लागि भण्डारण हुक।
तपाईंको लाभ - हामी तपाईं 100% सन्तुष्ट भएको चाहानुहुन्छ। यसैले हामी व्यक्तिगत ग्राहक सेवा, नि: शुल्क फिर्ताको साथ -० दिने रिटर्न नीति, साथै हाम्रो वेबसाइटमा उत्कृष्ट ग्रिल रेसिपीहरू र बीबीक्यू गाईडहरू प्रस्ताव गर्दछौं।
Profi कुक PC-GG 1179 ग्याँस ग्रिल,3स्टेनलेस स्टील बर्नर, एक्सएनएक्सएक्स हीटिंग क्षेत्र को लागि व्यक्तिगत। तापमान नियन्त्रण, असीमित चर तापमान सेटिङ, हटाउन सकिने ग्रीस कलेक्टर, तापमान सूचक, स्टेनलेस स्टील सूचक
[फ्रिश र लेकर] - ग्रिलिंग जस्तै लाग्छ? प्रोफिकुकबाट तपाईंको आफ्नै ग्यास ग्रिलमा एभिटिजिंग ग्रिल्ट विशेषताहरूको आनन्द लिनुहोस्। मासु, माछा, तरकारीहरू - जहाँ भए पनि तपाईलाई यस्तो लाग्छ।
[शक्तिशाली र उच्च गुण] - पीसी-जीजी एक्सएनएमएक्सले 1179 असीमित समायोज्य पुश बटनहरू पाइजो इग्निशनसँग (अधिकतम3किलोवाटको साथ) शक्तिशाली प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ग्रिलिंगको लागि प्रस्तुत गर्दछ। 9.3 x 56 सेमीको ग्रिलिंग सतहमा प्रत्येक घटकले यसको ठाउँ फेला पार्दछ र तयार भोजन लामो होल्डिंग ग्रिडमा आरामसँग राख्न सकिन्छ।
[SCHICK & MODERN] - प्रोफिकूक ग्यास ग्रिल मात्र यसका सुविधाहरूका साथ विश्वस्त छैन, तर उच्च-गुणवत्ता, कालातीत डिजाइनको साथ। ऊसँग यो ठूलो भण्डारण ठाउँ र वार्मिंग र्याकको अतिरिक्त आरामको उच्च स्तर पनि छ।
[लाइट क्लीनिंग] - ग्रिलिंग पछि ग्रिल गर्नु भन्दा पहिले हो। थोरै सफाईको साथ, तपाईं लामो प्रयोग पछि पनि तपाईंको ग्यास ग्रिललाई नयाँको रूपमा राख्नुहुन्छ। उच्च-गुणस्तरको इनामेल ग्रेटहरू हटाउन र सफा गर्न सजिलो छ, ताकि बारबेक्यु रमाइलो कहिल्यै छोटो हुँदैन।
[एक्सेसरीज] - जर्मनी र अष्ट्रियाका लागि ग्यास प्रेशर रिडुसर र एउटा ग्यास नली समावेश छ। थप रूपमा, तपाईं दुई विशाल कास्ट फलामका ग्र्याटहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईं तपाईंको ग्रील्ड खाना बकाया प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ।
अघिल्लो लेखबिजुली साइकल
अर्को लेखबगैचा पूल
बच्चाहरु को लागि सिटीrollर